SILVER SPRINGS, MARYLAND —
Russia Yoenderera Mberi Ichimbunyikidza Kodzero dzeZvitendero
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with government members via a video conference call at Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia, Feb. 10, 2021.
Russia iri kuenderera mberi nekumbunyikidza kusununguka kwezvitendero, zvikuru ichinangana nezvitenderi zvidiki nemasangano madiki.
Kereke yeJehova’s Witness iri kumbunyikidzwa nevakuru vakuru muRussia.
Munguva pfupi yapfuura, dare remuRussia rakatongera nhengo yechechi iyi, Aleksandr Ivshin, kupika mujeri kwemakore manomwe nechidimbu achipomerwa mhosva yekuva mutenderi wekereke iyi.
Mutongo uyu wakaomarara zvikuru, zvichitevera mutongo wedare repamusoro soro muna 2017, uyo wakabhana chechi yeJehova’s Witness, uchiti chitendero ichi chinoita zvakapfurikidza mwero.
Kupfurikidza mwero kunonzi kwakaitwa naIvshin, kunosanganisira kuronga zvidzidzo zvebhaibheri padandemutande nevamwe vake vechitendero ichi.
Musi wa Kukadzi 10, mapurisa emuMoscow nematunhu akakomberedza guta iri akapinda zvichisimba mudzimba gumi neshanu dzenhengo dzeJehova’s Witness, akadzisunga nekudzichengetedza achibvunzurudza vatenderi ava.
Vatatu vavo vachiri muhusungwa kubva musi uyu. Musi iwoyo, dare remudunhu reKursk rakaramba kukurumidza kuburitsa mujeri nhengo yekereke iyi iri kupika kwemakore matanhatu kubva muna 2017.
Aya maitiro enyika iyi, ayo ari kuramba achienderera mberi muRussia.
Sekuziva kwekomisheni yemu America inoona nezvekusununguka kwezvitendero pasi rose, hurumende yeRussia muna 2019, yakaramba yakanangana nezvitendero zvidiki ichizvibhadharisa mafaindi, kuchengetedza nhengo dzinenge dzabatwa, ichipomera vanhu ava mhosva dzekuita “zvinopfurikidza mwero.”
Imhosva muRussia kuita “zvinopfurikidza” mwero, kunyange hazvo pasina tsanangudzo yakajeka pamaparirwo emhosva iyi, izvo zvinopa hurumende yeRussia kuita madiro ajojina mukusunga vanhu vanenge vasingaite mhirizhonga vachiita zvinodiwa nezvitendero zvavo.
Mamiriro ezvinhu akanyanya kuipa gore rapera, sekubuda kuri kuita zviri kuitika kubva kumasangano akazvimirira.
Mapurisa emuRussia anonzi akapinda zvechisimba mudzimba dzevanhu dzinodarika chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nenhanhatu, uye akapomera mhosva vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kubva pavanhu mazana mana nemakumi matatu nevashanu veJehova’s Witness, nhengo dzechechi iyi makumi mana nembiri dziri mujeri pari zvino, uye makumi maviri nevanomwe havasi kubvumidzwa kubva padzimba dzavo.
Midziyo yechechi iyi yakabvutwa nehurumende, vatenderi vari pakati pe zviuru zvishanu nezviuru gumi vanofungidzirwa kuti vakatiza nuRussia kubva muna 2017, vachitya kumbunyikidzwa.
“America inoshora zvakadzama zviri kuitwa neRussia mukusunga vanhu vechitendero cheJehova’s Witness pamwe nezvimwe zvitendero,” anodaro mutauriri webazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Ned Price achiwedzera zvakare achiti:
“America inokomekedza kuti panyaya dzekodzero dzevanhu, munhu wese ane ruramo yekutambira kana kusatambira zvinhu semaonero ake akasununguka.”
Kukadzi 10, 2021
America Inoti Inokoshesa Chibvumirano cheParis Agreement
VaJoe Biden nemudzimai wavo Amai Jill Biden
Mune chimwe chiitiko chavo chekutanga mushure mekutora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica VaJoe Biden vakazivisa kuti America yainge yodzokera muchibvumirano chekukurudzira nyika dzepasi rino kuti dzichengetedze mweya wekufema nemamiriro ekunze chePARIS Agreement.
Chibvumirano ichi chakanyoreranwa muna Zvita 2015 asi chakatanga kushanda muna 2016. Sangano reUnited Nations richinyoresa nyika zana nemakumi mapfumbamwe dzichipinda muchibvumirano ichi muna 2021.
Chinangwe chechibvumirano ichi chakanangana nekuona kuti nyika dzose dzatevedzera zvakatenderana mukuchengetedza zviwanikwa uye kuona kuti mumaindastiri hamusi kushandiswa zvakawanda zvinosvibisa mweya wekufema.
Izvi zvikasaitwa zvinogona kukonzera mafashamu emvura, kusanaya kwemvura uye madutumupengo emhepo uye kudzikisawo kupisisa kwepasi rino pamwe nemoto inongotanga mumasango ichinetsa kumisa.
Kusagadzirawo nyaya iyi kunoreva kuti magungwa anotanga kuzarisa mvura rinogona zvekare kuva dambudziko kuvanhu.
VaBiden vakabuda pachena kuti kuchengetedza mamiriro ekunze chimwe chinhu chikuru chinokosheswa nehurumende yavo.
Pavaitsvaga rutsigiro rwekutungamira nyika yeAmerica gore rapera, VaBiden vakavimbisa kuti vakasarudzwa vanozodzosera America muchibvumirano cheParis Agreement ichi.
Pavaitora mhiko yekutungamira nyika musi wa 20 Ndira VaBiden vakatiwo pasi riri kuchema nekuda kwekubatwa kuri kuitwa zviwanikwa nemweya unofemwa nevanhu.
Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House Amai Jen Psaki vanoti mukudzokera muchibvumirano ichi, VaBiden vari kuratidza kukoshesawo kwavanoita kudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rino uye kuda kudzosera America mumatare anozeya nyaya dzakakosha pasi rose.
Izvi vanoti zvakaratidzwawo nekudzokera kweAmerica musangano rinoona nezvehutano pasi rose reWorld Health Organization, mumwe munongedzo wekuti VaBiden vanokoshesa kudyidzana nedzimwe nyika mukugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu vepasi rose.
VaBiden vakadomawo vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika VaJohn Kerry kuti vave chipangamazano chavo munyaya dzezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemamiriro ekunze. Aka ndekekutanga munhoroondo yeAmerica pachidomwa munhu pachigaro ichi.
Nyika dzakawanda dziri kutambira America nekudzoka kwayaita muchibvumirano cheParis Agreement ichi kusanganisirawo mutungamiri wenyika yeFrance VaEmmanuel Macron vakati zvakakosha kuti nyika dzepasi rose dziite mushandirapamwe mukuchengetedza mamiriro ekunze nezviwanikwa.
Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Mashoko Anotaura Pamire Hurumende yeAmerica
Ndira 28, 2021
Ndira 27, 2021
Mashoko Anoziviswa Pasi Rose neHurumende yeAmerica
Homwe yemubayiro unopihwa nebazi reAmerica rinodyidzana nedzimwe nyika, yeRewards for Justice program, iri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kumunhu ane mashoko anoita kuti Mir nevamwe vose vakaita kuti Mumbai ibhomnbwe, asungwe nekuendeswa kujeri.
Musi waMbudzi 26, 2008, varume gumi vaive nepfuti, uye vachidyidzana nechikwata chemagandanga anopfurikidza mwero, icho chiri muPakistan, cheLashkar-e-Tayyiba, chakarwisa nzvimbo dzakawanda muMumbai kuIndia.
Chikwata ichi chakarwisa nzvimbo dzaishanyirwa zvakanyanya nevashanyi, chiteshi chezvitima, pamwe nemuzinda unoshandiswa nevanhu vechitendero chechi Jewish.
Kurwisa uku kwakaitika kwemazuva akawanda, uye vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu, vaibva munyika dzakasiyana siyana gumi nenomwe, vakafa, kusanganisira varwisi vacho vapfumbamwe, uye vanhu vanodarika mazana matatu vakakuvara muchiitiko ichi.
Murwisi akapona muchiitiko ichi, akaurayiwa zviri pamutemo muna Mbudzi 2012, asi Sajid Mir, murume akaronga zvose kuitira kuti kurwisa uku kubudirire, haasati asungwa kusvika pari zvino.
Mir akapomerwa mhosva nedare repamusoro remuIllinois muAmerica musi was Kubvumbi 21, 2011. Dare iri rakaburitsa magwaro ekuti Mir asungwe zuva rakatevera.
Mir akapomerwa mhosva yekuronga kuparadza zvinhu munyika isiri yake; kubatsira nezvikwanisiro vanoita zvakapfurikidza mwero, kubatsira mukuurayiwa kwechizvarwa cheAmerica chaive kunze kweAmerica; kubhomba nzvimbo dzinoshandiswa neveruzhinji.
Muna 2019, Mir akaiswa pamazita emagandanga ari kutsvagwa zvakanyanya nebazi rematikitivha muAmerica.
Sajid Mir akaberekwa muna 1976 kana 1978 mu Lahore, Pakistan. Akareba zviri pakati pemasendimita zana nemakumi matanhatu nemashanu kusvika pazana nemakumi matanhatu nemanomwe, uye anorema makirogiramu makumi matanhatu.
Semaziviro eFBI, Mir ane chiso chine vanga pashaya yekuruboshwe, uye vanga pamusoro peziso rake rekurudyi.
Ani nani zvake ane ruzivo rwekuna Sajid Mir anofanirwa kutumira mashoko kuRewards for Justice achishandisa Whatsapp, Telegram, kana Signal panhamba dzinoti + 1 202 702 7843.
Zvose zvinotambirwa neRewards for Justice hazviburitswe pachena.
Ichi chiziviso chiri kutumirwa pasi rose nehurumende yeAmerica.